Xisbiga Midnimo Qaran oo hambalyeey guusha Recep Tayyip Erdoğan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xisbiga Midnimo Qaran ee uu hogaamiya Dr. C/raxmaan Macallin C/llaahai (Baadiyow) ayaa maanta hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee shacabka Turkigu doortay, Recep Tayyip Erdoğan.
War-qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska Xisbiga ayaa lagu yiri: “Xisbiga Midnimo Qaran (XMQ) wuxuu hambalyo diiran u dirayaa Madaxweynaha cusub ee dalka Turkiya, Recep Tayyip Erdoğan iyo Xisbiga Cadaaladda iyo Hurumarinta (AKP) oo ku guuleystay doorashada madaxweynenimada ee Turkiya”.
Qoraalka Xisbiga Midnimo Qaran ayaa lagu sheegay in intii Erdoğan ahaa R/wasaaraha dalka Turkiga uu sameeyey horumar ballaaran.
“Muddadii uu Erdogan ahaa Ra’isulwasaaraha dalkiisa, Turkiya waxey horumar weyn ka sameysay xagga dhaqaalaha, waxeyna horseed u noqotay damqashada bani’aadannimo iyo taageerada shucuubta dulman. Waxaa kale oo ay horseed u noqotay shucuubta u halgameysa xornimada iyo dimoqaraadiyada ee dunida Islaamka” ayaa lagu yiri qoraalka XMQ.
“Guusha Recep Tayyip Erdoğan waa guusha xornimada iyo dimoqaraadiyadda. Gaar ahaan, shacabka Somaaliyeed waxey abaal lama iloobaan ah uhayaan shacabka, xukuumadda, xisbiga AKP iyo madaxweyne Ergogan oo gurmad weyn oo dhan kasta saameynaya la garabjoogsaday shacabka Somaliyeed, una muujiyay walaalnimo dhab ah iyo gargaar hagar la’aan ah” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka Xisbigaas.
Ugu danbeyntii, XMQ ayaa sheegay inuu la qaybsanayo Xisbiga AKP iyo madaxweyne Erdogan farxadda guusha iyo damaashaadka, wuxuuna u arkaa gooshooda guusha XMQ.
Xisbiga ayaa sidoo kale xusay inuu farxadda la qaybsanayo dhammaan shucuubta u halgamaysa xornimada iyo dimoqaraadiyadda.
Recep Tayyip Erdoğan oo tan iyo sanadkii 2003 R/wasaare ka ahaa dalka Turkiga, islamarkaana doorashadii madaxtino ee shalay ku guulesytay ayaa sanadkii 2011 booqasho ku yimid caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, si indhaha caalamka ugu soo jeediyo dhibaatadii ka dhalatay abaartii xilligaas ku dhufatay Soomaaliya.